Nagu saabsan - Wuxi Lead qiray Makiinado Co., Ltd.
Ku tumashada birta
Wuxi Lead qiray Makiinado Co., Ltd. Is A Cnc Mashiinka Dukaanka U adeega Qiimaynta CNC Machined Qaybo, Birta jediyay iyo Sheet Birta Daabacaadda In A kala duwan ee Warshadaha.
Waxaan haynaa wax ka badan 15 sano oo khibrad soo saaris ah qaybo tayo leh iyo noocyo loogu talagalay soo saarayaasha qalabka asalka ah (OEMs) adduunka oo idil.
Waxaan nahay shirkad si gaar loo leeyahay oo la aasaasay 2000.
Bilowga, waxaa jira kaliya 2 mashiinka CNC oo ku jira aqoon isweydaarsiga macaamiisheenuna ma ahan shirkado waaweyn. Si kastaba ha noqotee, waayo-aragnimadeenna hodanka ah iyo tayada aadka u wanaagsan, shirkadeena waxay si dhakhso leh ugu koray macaamiisheenna si wadajir ah.
Mashiinnadayada CNC waxay kordheen 10 nooc. Shaqaalaheennuna waxay ka kordheen 2 ilaa 12.
Waxaan u guurnay warshaddeenna cusub. Oo waxaan bilaabeynaa inaan noqono Shirkad Mareykan Milatari ah OEM qeybiyeyaal.
Waxaan horay u haysannay in kabadan 20 mashiinno CNC ah. Oo waxaan u samaynay noocyada titanium iyo fiber galaaska noocyada shirkadda Milatariga.
Sababtoo ah tayo sarreysa iyo gaarsiinta waqtigeeda, ayaa waxaa nagula taliyay macmiilkeena Irish inuu noqdo alaab-qeybiye Wheel Hub oo loogu talagalay Racing Cycle ee Ciyaaraha Olombikada London 2012.
Waxaan ahayn Shirkad Mareykan Milatari oo cayiman titanium iyo Glassfiber CNC Machined qaybo alaab-qeybiye. Dhanka kale, waxaan sidoo kale bilownay inaan lashaqeyno shirkadda ugu caansan Mareykanka ee Auto Tuning.
Waxaan dhignay una guurnay warshaddeena cusub. Sannadkan, shaqaalaheennu waxay noqdeen in ka badan 50, waxayna xafiiskeenna ka samaysteen CA, USA.
Filo habka Mashiinka CNC, ganacsigeennu wuxuu ku ballaadhiyey birta iyo birta xaashida.
Imika, wali waan sii ballaadhinaynaa, hadafkeenu waa SHAQEYNTA QALABKA MAGAALADA CNC INTAGU TAHAY.
Waxaan ku sameeynaa qaybo caadiya shan fikradood oo muhiim ah.
Sanadihii la soo dhaafay, waxaan soo saarnay sumcad ah inaan nahay shirkad maamusha shaqooyinka adag ee aan cid kale dooneynin inay qabato. Go'aankeenna joogtada ah ee soo saarista qaybo iyo qaybo leh cilado cillad la'aan ah ayaa kooxdeena u beddelay khabiirro xalliya dhibaatooyinka. Taasi waa sababta aasaasiga ah ee aan wax ugu darsan karno Ciyaaraha Olombikada.
Annagu tartan ayaa nalagu qiimeeyay oo tayada waxba kama dhimeyno. Waxaan bixinnaa shahaado heer kasta oo u hoggaansamida ah iyo in aan la kulanno qeexitaanka. Qaybaha si fiican loo qaabeeyey oo laga farsameeyey qalabka wanaagsan waxay ka badan yihiin alaabada si raqiis ah loo sameeyey waana kuwo kharash badan waxtar u leh mustaqbalka fog. Iyada oo loo marayo tababarka Induction iyo tababarka joogtada ah, shaqaalaheennu waxay leeyihiin dareen tayo sare leh.
Waxaad amarkaaga kuhelaysaa waqtigii loogu talagalay, oo buuxa iyo qeexitaan.
Mashiinka Mashiinka, Wareejinta CNC, Shaabinta Birta, Nidaamka been-ka-sameynta birta si loo buuxiyo amarradaada.
4 khibrad leh fuliyaasha Adeegga Macaamiil ayaa kuugu adeegaya 24 saacadood 7 maalmood. Waxaan ku dadaaleynaa inaan noqono kuwa la heli karo oo la wada xiriiri karo sida 'dukaanka mashiinka xaafadaada'. Waan heli karnaa markaad noo baahan tahay. Nagala soo xiriir Wadahadalka khadka tooska ah, Telefoonnada ama Emailka.
cinwaanka No.7 Yuansheng Rd, Yangjian Industrial Park, Wuxi, Shiinaha
sanduuqa boostada info@leadmachinery.net